Mana ana m ajụ ajụjụ Doug na ị kwesịrị ibu ụzọ tinye ndị isi niile nọ n'ụlọ ọrụ gị? ndị nwere atụmatụ nke ụlọ ọrụ. Ikekwe Indianapolis dị na mbara ala ọzọ (Jeff, ị si Kentucky, kedu ihe ị chere?) Ebe otu ndị isi nwere oge na nghọta nke mgbasa ozi mmekọrịta iji ruo kumbaya. Mana ebe a, ụzọ kachasị mfe iji gbuo ụzọ nkwukọrịta ọhụrụ bụ ijide ya na nkwenye siri ike. Ọ bụghị na nkwenye ndị isi adịghị mkpa, mana na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume inweta, ọkachasị TUPU ị nwere ike igosi ROI ọ bụla
Atụmatụ mmalite obere oge na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ụfọdụ, n'ọtụtụ ụzọ. Ihe niile ị chọrọ bụ otu onye edemede na-enyonye anya, ụfọdụ ngwaọrụ dị ọnụ ala, yana otu nsogbu nkwukọrịta ị nwere ike ịlele. Ikekwe ọ dị ka isi ihe dị ka ịnweta ọtụtụ okporo ụzọ na weebụsaịtị gị. Ma ọ bụ ịzụlite mmata nke ihe nkwado na mmemme ọhụrụ. Ma ọ bụ na-agbasawanye mmasị ndị ahịa site na ịkọ akụkọ na-atọ ụtọ banyere otu ndị mmadụ si eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Ọ bụ ezie na m kwenyere na nke a ga-enye ụlọ ọrụ gị mbido ngwa ngwa na oge agaghị ezu iji gaa 'kọmitii oghere ojii', ahụla m na usoro a nwere ma ezigbo nsonaazụ na nsonaazụ. Ikekwe ihe atụ kachasị mma m hụrụ banyere atụmatụ a bụ enyi Chris Baggott's blog na Omume Kachasị Mma Email. N'ezie, Chris nwere uru nke ịbụ onye nwe ya na onye isi ahịa ahịa nke ExactTarget, ya mere ọ dị ntakịrị mfe ịwụli azụ n'oge ahụ.
Ajụjụ a abụghị ma blog Chris ọ nwere mmetụta. O nwere mmetụta dị egwu! Ajụjụ a bụ ma ọ ruru ogo ya niile ma nwee mmetụta azụmaahịa, nhazi niile, na ọ nwere ike nwee. Chris hapụrụ Kpọmkwem Ngwaọrụ na-amalite Compendium Blogware (Nkwuputa: Enyere m Chris aka wepụta echiche izizi) n'ihi na ọ hụkwara nke a!
Chris mụtara ụdọ nke ịde blọgụ ọtụtụ afọ na Typepad. Ka ọ na-erule oge Chris chọpụtara na blog nwere ike na Search Engine Marketing, mwekota, wdg, ọ gafeela oge ịhapụ TypePad na-eji ohere zuru ezu nke ịde blọgụ. E megharịrị ya n'ebe ọ bụla (ọ ka bụ # 1 maka Omume Kachasị Mma Email“. E nwere okwu iri na abụọ ndị ọzọ Chris gaara achọ ka e jikọtara ya maka ọgbọ ndu na ExactTarget, mana ọ nweghị ụzọ isi ghọta na ụbọchị ọ gbagoro ma bido ịde blọgụ. Ọ ga-ahụrịrị inwe ndị ọzọ na nzukọ blọọgụ - iji mee ka mmetụta ahụ pụta.
Nke a bụ ihe kpatara m ji bụrụ nnukwu onye na-akwado ịchọta ezigbo ndị ndụmọdụ mgbasa ozi maka azụmahịa gị. Ezigbo onye ndụmọdụ nwere ike nyochaa ngwá ọrụ gị, azụmahịa gị wee chọta ngwaọrụ kwesịrị ekwesị nke ga-adaba na atụmatụ gị. Ndị na - ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ha makwa maka mgbasa ozi mmekọrịta - ma nwee ike inyere gị aka ebe iji mezuo usoro gị, ọ bụghị naanị otu esi eme ya.
Gị IT Ihọd nwere ike inwe WordPress na-agba ọsọ na 5 nkeji (ama 1-pịa ịwụnye). Nke a ọ pụtara na ọ maara otu esi arụ isiokwu gị maka ndị na-arụ ọrụ ihe nchọgharị igwe na-achọ? Ọ maara otu esi ahazi permalinks na aha peeji maka mmetụta kachasị? Ọ maara ihe plugins ga-enwerịrị? Ee e, ọ naghị - ma ọ bụghị na ọ ga na-agba ọsọ na-aga nke ọma, na-ekwu okwu, ma na-adakwa n'akụkụ. Nke a bụ otu n'ime mpaghara ebe mmụọ Open Source ga - aghọrọ gị kpamkpam.
Ọtụtụ mgbe, ngalaba ahịa gị abụghị ihe kachasị mma maka ịme usoro mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị na-ere ahịa bụ ụyọkọ dị nkọ. Anyị na-eche na ụkwụ anyị na anyị na-enwekarị mkpokọta ika atụmatụ n'uche mgbe anyị na-ekwu okwu. Ọ bụrụ na i banye na netwọkụ mmekọrịta wee bido ịgba lingbụ nke a na-abụkarị edebe maka BS Bingo, ọ bụ akpaka F. Ọ bụrụ na ịgaghị agwa gị ka ị pụọ, dịrị njikere ka a gwa ụlọ ọrụ gị okwu n'ihu ọha maka imebi ụkpụrụ bụ isi nke mgbasa ozi mmekọrịta - ntụkwasị obi.
Isi okwu banyere otu esi amalite. Biko etinyekwala ntụkwasị obi gị na otu ‘ọkachamara’. Ọkachamara bụ okwu metụtara, ọkachasị maka mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị ụlọ ọrụ na-enyocha mmiri ugbu a na otu ha ga-esi wepụta usoro a dị egwu iji wulite mmekọrịta na nchọta maka ụlọ ọrụ ha. Kpachara anya maka okwu ndị dị oke egwu dị ka mgbe ọ bụla, mmadụ niile, onye ọ bụla… atụmatụ ị na-etinyeghị aka nwere ike ịbụ onye ga - eme ka ị nweta mmeri kachasị.